Maxkamadda Ciidamada oo dil toogasho ku fulisay Macalin Ilkacase iyo labo kale | RajoQaran News Around The World
Home WARARKA Maxkamadda Ciidamada oo dil toogasho ku fulisay Macalin Ilkacase iyo labo kale
Maxkamadda Ciidamada oo dil toogasho ku fulisay Macalin Ilkacase iyo labo kale
Maxkamadda Ciidamada qalabka sida ayaa saaka dil toogasho ah ku fulisay saddex ka mid ah Al-Shabaab oo uu ku jiro Maxamed Xaaji Axmed oo loo yaqaano Macalin Ilkacase.
Fagaaraha Dugsiga Tababarka ee Jeneraal Kaahiye ee Iskuul Boolisiyo ayaa saaka waxaa lagu toogtay Maxamed Xaaji Axmed (Macalin Ilkacase), Axmed Maxamed Haashim iyo Saalim Siciid Maxamed, kuwaas oo lagu helay dilal kala duwan oo ay ka geysteen Magaalada Muqdisho.
Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida ee Soomaaliya ayaa 19-kii Bishii July ee sanadkii 2019 waxaa ay xukun dil toogasho ah ku riday Macalin Ilkacase & Xubno kale,kadib markii ay racfaan ka qaateen xukun dl ah oo horay loogu riday, kuwaas oo Maxkamadu sheegtay inay dilal qorsheysan iyo weerar kal geysteen Magaalada Muqdisho.
Barnaamij gaar ah oo laga sii daayay Telefishinka Qaranka ayaa waxaa laga diyariyay Maxamed Xaaji Axmed (Macalin Ilkacase), kaasoo ku qirtay dilal uu ka geystay iyo kuwo uu abaabulay, waxaana Ilkacase ahaa Macalin wax ka dhiga Iskuulada lagu barto Luqadda Ingiriiska.
Xeer Ilaaliyaha Guud ee Ciidamada Qalabka sida ayaa ka hadlay fulinta xukunka dilka, waxaana uu ka sheekeeyay heerarka uu soo maray xukunka dilka ee raggan lagu fuliyay.
Macalin Ilkacase iyo kooxdiisa ayaa dilalka ay ka fuliyeen magaalada Muqdisho intii u dhaxeysay 2017 iyo 2019, waxaa ku jiray Jeneraalo ka tirsan Ciidamada qalabka sida.
Previous articleMaxaa caawa ka socda Madaxtooyada (Farmaajo, Rooble, Qoorqoor iyo Fahad oo…)
Next articleAkhriso: Maamulka G/Banaadir oo digniin culus u diray Musharaxiinta Madaxweynaha
Qaramada Midoobay oo ka digeysa cunto yari soo wajahday qaxooti ku nool gobolka Tigray
Guddoomiyaha Baarlamaanka Hishabelle oo gaaray magaalada Beledweyne
C/kariin Guuleed “Aniga iyo Fahad Yaasiin wax xiriir siyaasadeed nagama dhaxeeyo”